Kismaayo News » Askari ku qeeyliyey “waar ka carara waa iska qarxin rabaa” oo la abaalmariyey
Askari ku qeeyliyey “waar ka carara waa iska qarxin rabaa” oo la abaalmariyey
Kn: Askari la sheegey in uu baacsaday ninkii talaadadii isku qarxiyey meel u dhow xarumaha muhiimka ah ee dowladda ayaa la abaalmariyey.
Askariga oo la sheegey in uu isaga ninka isqarxin rabay ka celiyey illinka hore ee xarinta PS-ta ayaa la sheegey in uu fahmay in uu ninka wato waxyaabaha qarxa, kadib eryoodey isagoo xabad ku ridaya kuna daba qeeylinayo oo leh “Waar ka cararaay waa is qarxin rabaa”.
Ninkii naftiisa haligayay ayaa heley askar geed hoostiis jiifjiifta oo warmoog ah kadibna is qarxiyey, hal askari ayaa halkaasi ku dhintey, dad kale oo haween meesha mararay ahaana waa ku dhaawacmeen.
Meel aan ka fogeyn meesha qaraxa ka dhacay oo Tiyaatarka hortiisa ah waxaa taagan askari hal ku dhigiisu yahay “ha igula soo leexan, iga leexo”, isagoo ola jeeda dadka ismiidaamiya, hadalkiisuna ka dhiganyahay “waxaad qarxineyso qarxiye, aniga lee iga duw”. Inta badan habeenkii ayuu waardiyaha galaa.
Warar laga heley wardoonka waxa ay sheegayaan in magaalada ay ku jiraan 3 nin oo kale oo isqarxin raba, shacabkana waxaa loo sheegayaa in ay ka digtoonaadaan.
Abaalmarintani waxa ay dhiirogalineysaa in askarta iyo shacabka ay ka hor tagaan qaraxyada noocaan oo kale ah.